Indlu Enhle Nenethezekile enokufinyelela Okuqondile Komzila - I-Airbnb
Indlu Enhle Nenethezekile enokufinyelela Okuqondile Komzila
Colebrook, New Hampshire, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Mike And Amy
U-Mike And Amy Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa eLa Maison Monadnock, indawo yasekhaya ekahle yokuvakasha kwakho kweNorth Country.
Ngokufinyelela okuqondile kwe-ATV kusukela kumnyango wangaphambili nokufinyelela kwemoto yeqhwa ukusuka ngemuva, uhambo lwakho lonyaka wonke lulindile.
Sitholakala enhliziyweni yedolobha laseColebrook, lapho ukudla nokuthenga kuwuhambo nje, ukudoba, ukugibela izintaba, nokuhlola iCanada kuyimizuzu nje ngemoto, futhi ukuthula nokuphumula kukhona yonke indawo!
Indlu yethu yasepulazini enhle yango-1902 inezinsiza zasekhaya eziqinisekisa ukuthi zizokwenza ukuhlala kwakho kube intofontofo. Kufakwe nosilingi woqobo lukathayela kanye nephansi le-maple kanye nokuhlobisa kwendlu yasepulazini e-rustic, izihambeli zizojabulela ukuhlanganisa okudala nokusha.
Kunamakamelo okulala amathathu, ngalinye linemibhede yabantu ababili, ikhabethe kanye ne-bureau. Yonke imibhede inomatilasi we-memory foam.
Kukhona indlu yokugezela eyodwa eneziqephu ezine ezinazo zonke izinsiza ezijwayelekile (i-shampoo, insipho, i-conditioner, ilineni, iphepha lasendlini yangasese, njll).
Ikhishi elikhulu eligcwele olakho, eligcwele zonke izidingo eziyisisekelo zokupheka nokubhaka.
Igumbi lokudlela lihlala eziyisithupha etafuleni elikhulu lendlu yasepulazini elakhelwe ukudla kwakusihlwa komndeni, indawo yokusebenza, nemibala.
Nethezeka endlini yokuphumula evulekile ehlala abantu abayisithupha. Finyelela i-Netflix yakho, i-Amazon, namanye ama-akhawunti wokubuka imidlalo/imuvi ku-Smart TV yethu engu-43-intshi noma uphequlule iwebhu nge-wi-fi eyimfihlo esheshayo.
Gxumela ku-ATV kanye nasezindleleni zemoto eqhweni ngokuqondile usuka endaweni, futhi ugcine amathoyizi akho ngokuphephile egalaji elikhulu elinezimoto ezimbili.
Qeda izinsuku zakho ezimatasa eduze komgodi womlilo endaweni engu-⅓ acre ngemuva.
I-TV ene- Hulu, ikhebula ye-premium
4.93 · 138 okushiwo abanye
Sitholakala enhliziyweni yedolobha laseColebrook, ibanga lokuya ezitolo nje!
Ibungazwe ngu-Mike And Amy
Simane sikushayele ucingo nganoma imiphi imibuzo nezidingo zakho, kodwa siyabuhlonipha ubumfihlo bakho.
UMike And Amy Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Colebrook namaphethelo